Shiinaha warshadaha gelatin warshad Match iyo alaab-qeybiyeyaasha. Gelken
Gelatin waa macromolecule bayooloji ah, sidaas darteed wuxuu leeyahay xoogaa sifooyin ah macromolecule. Gelatin wuxuu isku dari karaa ilaa 10 jeer culeyskiisa biyaha dhexdiisa, ka dib wuxuu qaataa biyaha wuuna bararaa, taasoo ka ilaalin karta badeecada inay soo daadato ama fuuqbax iyo yaraato. Marka gelatin qalalan la dhigo qadar biyo ah, waxaan marka hore arki karnaa in lakabkiisa sare uu si tartiib tartiib ah u sii ballaaranayo. Markuu waqtigu sii socdo, ballaadhinta ayaa si tartiib tartiib ah ugu soo baxda lakabka gudaha. Ifafaalahaan waxaa lagu magacaabaa "barar", ama iskudhac "barar" .Gelatinka balaariyay waxaa lagu kululeeyaa in kabadan 35 ℃ si loo sameeyo xal isku mid ah oo biyo ah. Si kooban, gelatin waxaa marka hore lagu qooyay biyo qabow 60 daqiiqo ka dibna lagu dhalaalay biyo qubeyska ka hooseeya 80 ℃.
Xalka ay kujirto gelatin si dhakhso leh ayaa loo walaaqi karaa si loo sameeyo jir xumbaynaya, iyo maadada 'gelatin' iyo cufnaanta walaaqa ayaa go'aamisa maqaarka sheyga xumbada leh.
Warshadaha Gelatin ee ciyaarta waa nooc ka mid ah gelatin tayo wanaagsan leh oo si gaar ah loogu isticmaalo soo saarista tartamada. Sababtoo ah awoodeeda xumbada wanaagsan iyo nafwaaji sare, waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa sidii wakiilka xumbaynaya soosaarida cayaaraha.
Tiknoolajiyada wax soo saarka gelatin ee warshadaha
1. Ku qoo qashinka maqaarka biyaha lime ilaa 3-5 maalmood;
2. Mashiinka dharka lagu dhaqo ayaa nadiifin doona oo kicin doona maqaarka 3-4 saacadood (waqtigan, maqaarka wasakhda iyo qashinka adag ayaa nadiif noqon doona oo jilicsan);
3. Ka dib ku qoy maqaarka warshadaha hydrochloric acid kuna kari biyo.
4, 6 ilaa 10 saacadood kadib, waxyaabaha gelatinous-ka ah ee maqaarka wasakhda ku shubaya biyaha, biyaha gelatinous-ka waxaa lagu soo saaraa weelka birta furan, waxaana lagu daraa nadiifinta hydrogen peroxide, bleaching;
5. Habeen ka dib qaboojinta, biyaha ku jira berkedda birta waxay isu beddelayaan gelatin, ka dibna waa la qalajin doonaa oo la jajabin doonaa si ay u sameysmaan walxo gelatin ah.
Hore: Gelatin-warshadeed oo loogu talagalay Xabagta Jelly
Xiga: Warshadaha Gelatin ee Rinjiga